Fiarovana ny sisin-tany, tsy fandriampahalemana: nahazo vedety, moto, kamiao, fiara 4X4… ny zandary | NewsMada
Fiarovana ny sisin-tany, tsy fandriampahalemana: nahazo vedety, moto, kamiao, fiara 4X4… ny zandary
Raitra ny fitaovana azon’ny zandarimariam-pirenena entina miatrika ny fiarovana ny sisin-tany sy ny tsy fandriampahalemana. Nahitana vedety roa haingam-pandeha, moto, kamiaobe, fiara 4×4 ary Radio ahafahan’ny zandary miasa ao anatin’ny fotoana haingana…
Vedety haingam-pandeha miisa roa, kamiaobe miisa telo, moto miisa 40 hampiasain’ireo zandary isaky tobim-paritra any amin’ny faritra mena amin’ny asan-dahalo, fiara 4×4 miisa dimy ary ireo fitaovana momba ny informatika. Araka ny fanazavan’ny tale misahana ny fitantanana sy ny fandraharahana ara-bola eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Kassimo Aruna Bessuny, vola mitentina 31 955 000 000 Ar no natokan’ny fanjakana ho amin’ny lafiny fampitaovana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Nanao ezaka manokana ny zandarimariam-pirenena ny amin’ny fanatsarana ny fitaovana hiadiana amin’ny tsy fandriampahelamana sy hiarovana ny sisin-tany mba tsy hivoahan’ireo harenantsika eto Madagasikara. Misy koa ireo nividianana fitaovam-piadiana entin’ny zandarimaria manatanteraka ny fitandroana ny filaminana. Nohamafisin’ity tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ity hatrany fa manaraka ny didy aman-dalana momba ny tsenam-panjakana ny nahazoana ireo fitaovana ireo. Nilaza kosa ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Randriamanarina Jean Christophe, tsy andeferana ireo zandary manimba fitaovam-panjakana noho ny tsy fitandremana. Miofana manokana ny olona mampiasa ireo fitaovana ireo. Matihanina amin’ny fampiasana ireo fitaovana ireo isika eto anivon’ny zandarimariam-pirenena, araka ny nambaran’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena.
Tsy andeferana ny manimba fitaovam-panjakana…
Vina napetraky ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena ny hoe “Zandarimaria matihanina”. Noho izany, mampitandrina sy handray fepetra hentitra ireo zandary amin’ny fanaovana an-tsirambina ny asa, indrindra amin’ny fanaovana lozam-pifamoivoizana, hoy ny fanazavan’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa, omaly teny amin’ny toby Ratsimandrava, nandritra ny lanonana fandraisana tamin’ny fomba ofisialy ireo fitaovana vaovao azon’ny zandarimariam-pirenena ireo. Noraisina tamin’ny fomba ofisialy, omaly, araka izany, ireo fitaovana vaovao hampiasain’ny zandarimariam-pirenena amin’ny fiarovana ny andriampanjakana ary ny olona sy ny fananany. Volam-panjakana nomena ny zandarimariam-pirenena izay natokana manokana hividianana fitaovana hampiasain’izy ireo amin’ny fanatanterahana ny asa aman-draharaha nankinina amin’izy ireo no nahazoana ireto fitaovana vaovao ireto.